नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनबाट सभापति पदमा पुनः निर्वाचित भएका छन् । सभापतिका लागि मंगलबार भएको पुनः मतदानबाट उनी विजयी भएका हुन् । देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा विजयी भएका हुन् ।
सभापति देउवा प्रतिस्पर्धी डा. शेखर कोइरालालाई ९ सय ७ मतान्तरले पाराजित गर्दै विजयी भएका हुन् । मङ्गलबार राति सम्पन्न मतगणनामा जम्मा खसेको मत ४ हजार ५ सय ७४ मा देउवाले २ हजार ७ सय २४ मत प्राप्त गरे भने डा. कोइरालाले १ हजार ८ सय १७ मत प्राप्त गर्नुभएको पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ । जम्मा ३५ मत बदर भएको थियो ।
दिउँसो ३ः३० बजेदेखि सुरु भएको मतदान राति ९ बजे सम्पन्न भएको थियो । मतदानमा कुल ४ हजार ७ सय ४३ मतदातामध्ये ४ हजार ५ सय ७४ ले मतदान गरेका थिए । सोमबार भएको निर्वाचनमा सभापति पदका ५ जना प्रत्यासी कसैले पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याउन नसकेपछि पार्टी विधानअनुसार सबैभन्दा बढी मत ल्याउने प्रधानमन्त्री एवं वर्तमान पार्टी सभापति देउवा र नेता डा. कोइरालाबीच मङ्गलबार पुनः मतदान भएको हो ।
सोमबार भएको मतदानमा प्रधानमन्त्री एवं वर्तमान सभापति देउवाले २ हजार २ सय ५८ र कोइरालाले १ हजार ७ सय २ मत प्राप्त गरेका थिए । सभापतिका अन्य प्रत्यासी पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले ३७१, उपसभापति विमलेन्द्र निधिले २५०, र केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरूङले २२ मत प्राप्त गरेका थिए ।
कांग्रेसका १६ जिल्लाका अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] नेपाली कांग्रेस को १६ जिल्लामा हुने भनिएको अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी १६ जिल्लाको अधिवेशन स्थगित भएको जनाएको छ । […]
कांग्रेस महामन्त्रीमा गगन र विश्वप्रकाश विजयी « Mero LifeStyle
सभापतिमा विजयी देउवाको विद्यार्थी राजनीतिदेखि जेल जीवनसम्म « Mero LifeStyle